ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်မာ – ၄ | Saw Aye Chan ~ Myanmar Software Engineering
မလိုအပ်ပဲ ကုဒ်တွေအလွန်များနေတာ တွေ့ရတယ်။
သိမ်းဆည်းစရာအဖိုးတန် (storage bytes) နေရာတွေကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်တယ်။
Source control စနစ် ရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကို ပိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်။
သူတို့နားက ကောင်းတဲ့ကုဒ်တွေကိုလည်း ပိတ်ဆို့စေနိုင်တယ်။
ဘာကြောင့်များ မလိုအပ်ပဲ ကုဒ်တွေ များပြားနေရပါလိမ့်။
တချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံကို ပြန်ကြားချင်ကြတယ်။
သင်သူတို့နဲ့ဆုံလည်း သူတို့က ပါးစပ်ပေါက်ပိတ်မသွားဘူး။
ဒီလူတွေဟာ ပါတီတွေမှာ သင်မဆုံချင်တဲ့လူတွေပေါ့။
တချို့လူတွေကြတော့ သူတို့ကုဒ်ကို သူတို့အလွန်နှစ်သက်ကြပြန်တယ်။
ဒီတော့သူတို့က ကုဒ်များစွာမလိုအပ်ပဲ ရေးကြတယ်။
နောက်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သူတို့က တစ်နေ့ကုဒ်အကြောင်းရေ ထောင်နဲ့ချီရေးမှ တိုးတက်တယ်လို့ အကဲဖြတ်တတ်တဲ့ အယူလွဲမန်နေဂျာလက်အောက်မှာ လုပ်ရတဲ့ ပရိုဂရမ်မာတွေဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။
ကုဒ်တွေအများကြီးရေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ သင်ဆော့ဝဲတွေအများကြီးအလုပ်လုပ်တယ်လို့ ပြော၍မရပါ။
တကယ်တော့ တချို့ကုဒ်တွေက သင့်ဆော့ဝဲကို မကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူး သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။
မှတ်ရန် ။ ။ ကုဒ်လျှော့ရေးခြင်းဖြင့် ဆော့ဝဲပိုအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျုပ်ရဲ့ဆော့ဝဲအရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတခုကတော့ ကုဒ်တွေကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတာတခုကတော့ ဆော့ဝဲစနစ်တခုကနေ ကုဒ်အကြောင်းရေ ထောင်ပေါင်းများစွာကို ကုဒ်ဆယ်ကြောင်းလောက်နဲ့ အစားထိုးလိုက်နိုင်တာပါပဲ။
ဘာကြောင့် ကုဒ်တွေများလွန်းတာဟာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ယုံမကပဲ ဆိုးရွားလှတာလဲ။
မလိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေက အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းများစွာ ရှိပါတယ်။
ကုဒ်အသစ်တကြောင်းရေးခြင်းဟာ လူ့အသက်တစ်ချောင်းစတင်မွေးဖွားလိုက်သလိုပါပဲ။ ဆော့ဝဲထုတ်ကုန်သစ်အဖြစ်မရောက်ရှိခင် ဆော့ဝဲလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အသုံးဝင်ပြီး အဖိုးတန်ဖြစ်လာအောင် ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်သလို ဂရုစိုက်ပေးမှရပါမယ်။
သင့်ဆော့ဝဲစနစ်ရဲ့ ဘ၀သက်တမ်းတလျှောက်မှာ ဒီကုဒ်တစ်ကြောင်းကို သင်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကုဒ်တကြောင်းအတွက် ပြင်စရိတ်နည်းနည်းကျပါလိမ့်မယ်။ သင်ကုဒ်များများရေးလေ ပြင်စရိတ်ပိုများလေပါပဲ။ ကုဒ်တကြောင်းက အချိန်ကြာကြာပိုအသက်ရှင်လေ သူ့အတွက်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ပိုများလေပါပဲ။ ကျုပ်တို့ကို ဒေ၀ါလီခံရစေဖို့မဖြစ်ခင် မလိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေကို အဆုံးသတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်တာ ရှင်းပါတယ်။
ကုဒ်တွေပိုများလာလေလေ ပိုဖတ်ရလေလေ ပိုနားလည်စရာများလာလေလေပါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျုပ်တို့ရဲ့ ပရိုဂရမ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ပိုခက်လာရော။ မလိုအပ်တဲ့ကုဒ်အပိုတွေဟာ function တခုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖုံးကွယ်ပစ်နိုင်တယ်။ ဆင်တူသလိုရှိနေတဲ့ကုဒ်တွေမှာ ငယ်ပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ကွဲပြားချက်တွေကိုလည်း ဖုံးကွယ်ပစ်နိုင်တယ်။
ကုဒ်ပိုများလာလေလေ ပြင်ဖို့လိုလာရင် ပြင်စရာပိုများလာလေ့ရှိတာမို့ ပရိုဂရမ်ကို ပြင်ဖို့ ပိုခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။
ကုဒ်တွေက ချို့ယွင်းချက်(bugs) တွေကို ကွယ်ဝှက်ထားပေးနိုင်တယ်။ ကုဒ်တွေပိုများလာလေလေ ချို့ယွင်းချက်တွေ ပုန်းခိုစရာနေရာပိုများလာလေလေပါပဲ။
ချွတ်စွပ်တူတဲ့ကုဒ်တွေက ပိုလို့တောင် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ကော်ပီကူးထားတဲ့တစ်နေရာက ကုဒ်တွေရဲ့ချို့ယွင်းချက်ကို သင်ပြုပြင်လိုက်ပေမယ့် သင်မသိပဲ ထပ်ရှိနေသေးတဲ့ နောက်ထပ်၃၂ နေရာလောက်က လုံးဝတူညီတဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေကို ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
မလိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေဟာ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တတ်ပါတယ်။ မသုံးပဲထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်း(components) တွေ၊ အသက်မဲ့နေတဲ့ကုဒ်တွေ၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ မှတ်ချက်(comments) တွေ၊ မလိုအပ်ပဲ စကားလုံးတွေများပြားလွန်းတာတွေ စသဖြင့် မလိုအပ်တဲ့ကုဒ်ပိုတွေဟာ အသွင်မျိုးစုံနဲ့ရှိတတ်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်မဲ့နေတဲ့ကုဒ်တွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဥပမာပေးရရင် မလိုအပ်တဲ့ မှန်မမှန်စစ်ဆေးခြင်းတွေပါပဲ။
ပျာယာခတ်အောင်ရေးထားတဲ့ logic တွေဟာ ပျာယာခတ်နေတဲ့စိတ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
Logic တည်ဆောက်ပုံတွေကို သေချာနားမလည်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီလိုရေးလိုက်တော့ ပိုပြီး ကျစ်လစ်တဲ့အပြင် ပိုဖတ်ရလွယ်လို့ နားလည်ဖို့ပိုလွယ်ကူလာတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတကြောင်းနဲ့တူလို့ ဖတ်ရတဲ့လူတွေကိုလည်း ကူညီရာရောက်တယ်။
Compiler ကလည်း ဒီလိုရေးလို့ စိတ်လုံးဝမဆိုးဘူးဆိုတာ သင်သိပါသလား။
ထို့နည်းတူစွာ စကားလုံးဖောင်းပွနေတဲ့ အောက်က စစ်ဆေးချက်ကို
အပြင်လောကမှာတော့ ဒီထက်ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ စစ်ဆေးခြင်းတည်ဆောက်ပုံတွေကို ကျုပ်တို့ မြင်တွေ့ဘူးမှာပါ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကို ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ပစ်နိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ရဲ့ အစွမ်းအစကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့။
တကယ့်အပြင်လောကမှာ ဒီထက်ပိုရှုပ်ထွေးနက်နဲတာတွေက ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေ
ဒါကို တကြောင်းတည်းနဲ့ပြတ်အောင် ဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်
ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်မလုပ်ပဲနဲ့ ပြောချင်တာကို တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။
သင်သုံးတဲ့ ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲသိအောင် လုပ်ဖို့ မရှက်ပါနဲ့။
ပရိုဂရမ်မှာရေးထားတဲ့ဖော်ပြချက် ( expression ) တွေဟာ ဘယ်လိုအစဉ်အတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ထားပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းဖြင့် မလိုအပ်တဲ့ logic တွေ အများကြီးကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်။
မှတ်ရန်။။ ကုဒ်တွေကို တိုတိုနဲ့ ရှင်းရှင်းရေးသားဖော်ပြပါ။ မလိုအပ်ပဲ ကွေ့ကောက်ဝေ့၀ိုက် ရေးသားခြင်းမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကုဒ်တွေကို cut-and-paste လုပ်ပြီး ပရိုဂရမ်ရေးသားမှုမျိုး ၊ ထပ်ကာထပ်ကာရေးမိနေတဲ့ကုဒ်တွေကို function တခုခွဲထုတ်ပြီးရေးလိုက်ဖို့ အပျင်းထူတဲ့ ပရိုဂရမ်မာတွေက တစ်နေရာက တစ်နေရာကို စာအားလုံး copy ကူးပြီး ရေးသားမှုမျိုးကနေ ကုဒ်ထပ်တာတွေ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
နည်းနည်းလေးပြင်ပြီး တခြားနေရာကို ကူးယူရေးသားခြင်းက စည်းကမ်းပိုဖောက်ဖျက်ပါတယ်။
ကုဒ်တွေကို သင်ကူးယူပြီး ရေးလိုက်တဲ့အခါ ထပ်နေတဲ့ကုဒ်တည်ဆောက်ပုံကိုပါကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ဟာ ရှိပြီးသား ချို့ယွင်းချက်(bugs) တွေကို ကူးယူမိပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။
တနေရာက ချို့ယွင်းချက်တွေကို သင်ပြုပြင်လိုက်ပေမယ့် နောက်တနေ့မှာ နောက်တနေရာက ချွပ်စွပ်တူတဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေက သင့်ကို ဒုက္ခပေးနေဦးမှာပါ။
နေရာတိုင်းမှာထပ်ကာထပ်ကာပါနေမယ့်ကုဒ်တွေကို function တခုအနေနဲ့ ထုတ်ရေးပါ။
ဆင်တူနေတဲ့အပိုဒ်များပြီး နည်းနည်းလေးသာ ကွဲပြားမှုရှိခဲ့ရင် ကွဲပြားတာတွေကို function ထဲသို့ parameter တခုပေးပို့ပြီး ရေးသားပါ။
မှတ်ရန်။ ။ ကုဒ်တွေကို အပိုဒ်လိုက် ကူးမရေးပါနဲ့။ ဘုံ function တခုအဖြစ် ထုတ်ရေးပါ။ ကွဲပြားမှုလေးတွေအတွက် parameter သုံးပြီး ဖော်ပြရေးသားပါ။
DRY နည်းလို့ လူသိများတဲ့ နည်းတခုရှိပါတယ် ။ အရှည်က Don’t Repeat Yourself ပါ။ ထပ်ကာတလဲမလုပ်ပါနဲ့။ မလိုတာတွေမပါတဲ့အပြင် မထပ်တဲ့ကုဒ်မျိုးကို ရည်ရွယ်ရေးသားပါ။ ဆင်တူတဲ့ကုဒ်တွေကို မျှဝေသုံးလို့ရတဲ့ function တခုအဖြစ် ရေးသားခြင်းအားဖြင့် ကုဒ်တွေဟာ ပိုမိုချိတ်ဆက်လာတာကို သတိထားပါ။
မျှဝေသုံးရတဲ့ တနေရာထဲကို မှီခိုရသလိုဖြစ်လာပြီး ထိုနေရာကို ပြင်လိုက်ရင် တခြားခေါ်သုံးထားတဲ့နေရာတွေကိုပါ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကတော့ ဒီလိုပြင်ဆင်ရတာ အဆင်ပြေပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ ဒီလိုဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ရေရှည်မှာ ကူးရေးတာထက် ပိုပြသနာတက်နိုင်လို့ တာဝန်သိသိ ရေးသားပါ။
ကုဒ်တွေထပ်နေရတာ အားလုံးဟာ တမင်တကာလုပ်လို့ ပရိုဂရမ်မာတွေရဲ့အမှားကြောင့်မို့လို့ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။
မရည်ရွယ်ပဲ ထပ်သွားတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
သူများရေးပြီးသားရှိတာကိုမသိပဲ ပြန်တီထွင်နေတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
အဆင်သင့်အသုံးချနိုင်တဲ့ third party library တခုရှိတာကို မသိပါပဲ function အသစ်တခုတည်ဆောက်ရေးသားနေတာမျိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက တကယ်ဆိုးပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှိပြီးသား library တခုက ပိုမှန်နိုင်ပြီး ပိုစမ်းထားမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
အများသုံး library တွေကို သုံးခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုတွေကို သက်သာစေမယ့်အပြင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အမှားတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
အနုစိတ်ထပ်နေတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ
if တခုတည်းနဲ့စစ်ပြီး သုံးကြောင်းလုံးကို အတွင်းထဲမှာထားလိုက်ခြင်းဖြင့် ပိုသပ်ရပ်စွာရေးနိုင်ပါတယ်။
loop များစွာပတ်နေတာကိုလည်း loop တခုထဲသုံးပြီး ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ
အဖြစ်ရေးတာက ပိုဖတ်ရလွယ်ပြီး ပိုနားလည်ဖို့လွယ်တဲ့အပြင် loop တကြိမ်ပတ်ရသက်သာသွားလို့ ပိုမြန်လာပါတယ်။
ဒီလိုထပ်နေတဲ့ စစ်ဆေးမှုမျိုးကို သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။
သင်က ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင် တမင်တကာရေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထားတဲ့ ကုဒ်တွေဟာ ဒီလိုပုံစံမျိုး အဆုံးသတ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
မှတ်ရန်။ ။ ထပ်နေတာတွေတွေ့ရင် သင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ကျုပ်မကြာသေးခင်ကပဲ device driver တခုရေးထားတာကို အမှားရှာပေးတုန်း ကုဒ်ထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ loop နှစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။
သေချာစစ်ကြည့်လိုက်တော့ loop နှစ်ခုဟာ လုံးဝနည်းပါတူနေပြီး သူတို့ထဲကို ပေးပို့လိုက်တဲ့ data type ပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်မျှသာကွဲပြားခြားနားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကုဒ်အကြောင်းရေပေါင်း သုံးရာလောက်ရှိတဲ့ loop ထဲမှာ ဒီလိုထပ်နေတာကို သတိထားမိဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။
တကယ်ကို ကွေ့ကောက် ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။
Loop တခုချင်းဆီမှာ မတူတဲ့ ချို့ယွင်းချက် (bugs) တွေပြင်ထားလို့ ကုဒ်တွေက အလွှာလိုက်ကွာသလို ကွာလာပြီး အင်မတန်ခန့်မှန်းရခက်လာပါတယ်။
နည်းနည်းလောက်အားစိုက်ပြီး Loop နှစ်ခုကို တခုထဲဖြစ်အောင် ပေါင်းရေးလိုက်တာ ပြသနာတ၀က်လောက်လျော့ပါးသွားစေပြီး ကျုပ်အတွက်လည်း တနေရာထဲကို အာရုံစိုက်ပြီး အမှားရှာနိုင်လာပါတယ်။
သင်မပြုပြင်ပဲထားရင် သင့်ကုဒ်တွေဟာ ပုပ်ဆွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကုဒ်တွေ သေတောင်သေသွားနိုင်တယ်။ သေနေတဲ့ကုဒ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှခေါ်မသုံးတဲ့ကုဒ် ပရိုဂရမ်က ဘယ်တော့မှ မရောက်ရှိနိုင်တဲ့ကုဒ်တွေပါ။ သူတို့မှာ အသက်မရှိတော့ဘူး။ သင့်ကုဒ်ကို အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပါ။
အောက်က ဥပမာတွေက သေဆုံးသွားတဲ့ကုဒ်တွေပါ။ အမှတ်တမဲ့ကြည့်ယုံနဲ့သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါ။
ဘယ်တော့မှခေါ်မသုံးတဲ့ function တွေ
ကြေငြာထားပြီး ဘယ်သောအခါမှ ခေါ်မသုံးတဲ့ variable တွေ
Function ထဲကို parameter တခုအဖြစ်ပို့ပေးလိုက်ပေမယ့် အဲ့ parameter ကို ဘယ်တော့မှ ခေါ်မသုံးမိတာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ parameter တွေ
ကြေငြာထားပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ခေါ်မသုံးတဲ့ Enums, structs, classes, or interfaces တွေ
စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ဒီကမ္ဘာကြီးက ဆိုးရွားတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပဟေဠိဆန်နေကြတာပါ။
ကုဒ် editor တခုထဲမှာ မှတ်ချက်တွေကို ကျော်ခွပြီးဖတ်နေရတာမျိုး သင်ကြုံဘူးမှာပါ။
တချို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်က ဦးနှောက်ပျက်သွားစေလောက်မယ့် မှတ်ချက်တွေ သိန်းသန်းချီရေးပါမှ ကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်တာမျိုးပါ။ တကယ်ကူညီရာမရောက်ပါဘူး။
ကောင်းတဲ့ကုဒ်က မှတ်ချက်တွေ တထမ်းတပိုးနဲ့ အထောက်အကူပြုတာမျိုး မလိုအပ်ပါဘူး။
ကောင်းတဲ့ကုဒ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ဆိုတာကို ရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူး။
Variable တွေ function တွေ class တွေရဲ့ နာမည်တွေကို သေချာဂရုတစိုက် နာမည်ပေးခြင်း ကုဒ်တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကောင်းအောင်လုပ်ထားခြင်းဖြင့် သင့်ကုဒ်က လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိမှာပါ။
အထက်စာကြောင်းပါ အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို မှတ်ချက်ထဲ ထပ်ထည့်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
တခြားထပ်နေတာတွေလိုပဲ ကုဒ်မှာရှင်းနေတာတွေကို မှတ်ချက်ထဲမှာထပ်မံဖော်ပြခြင်းဖြင့် ကုဒ်ပြင်ရင် မှတ်ချက်ပါပြင်ရမှာကို မပြင်မိတဲ့အခါ ပိုအန္တရာယ်များပါတယ်။
အရူးထရေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေဟာ သိမ်းရမယ့် bytes ပမာဏကိုပါ ဖြုန်းတီးရရောက်ပါတယ်။ အောက်ပါဥပမာကိုကြည့်ပါ (I တစ်တိုးတာ ပရိုဂရမ်မာတိုင်းသိပါတယ် မှတ်ချက်ပေးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။)
နောက်ဥပမာတခုကိုကြည့်ပါ။ (မှတ်ချက်ပေးဖို့မလိုအောင် ရှင်းပါတယ်)
တချို့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ algorithm တွေ ကုဒ်အပိုင်းတွေ လောက်ပဲ မှတ်ချက်ပေးပြီး ရှင်းပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ရေးထားတဲ့ ကုဒ်အပိုင်းက မှတ်ချက်များစွာလိုအပ်ပြီဆိုရင် function တခုကို နာမည်ကောင်းမွန်စွာပေးပြီး ထို function အတွင်း လိုအပ်တဲ့ Logic တွေ ခွဲထုတ်ရေးသားဖြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းကြည့်ပါ။
မှတ်ရန်။။ သင်ပေးလိုက်တဲ့မှတ်ချက်အကြောင်းတိုင်းက ကုဒ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို မြင့်တက်ပါစေ။ ကုဒ်တွေက ဘယ်လိုအလုပ်လဲ ဘာလုပ်လဲ သူ့ဘာသူပြောပြနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ကတော့ ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတာ ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ ကုဒ်ဖတ်တဲ့သူအတွက် တကယ်ကို ဘာကြောင့်လုပ်လဲ မရှင်းလင်းမှသာ မှတ်ချက်ထည့်သင့်ပါတယ်။
ကုဒ်အဟောင်းတွေကို တကယ်မဖယ်ရှားပဲ မှတ်ချက်အဖြစ်နဲ့ ပိတ်လိုက်တာမျိုး အတွေ့ရများပါတယ်။
အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။ ကုဒ်တွေကို တကယ်ဖျက်ပစ်ဖို့ မ၀ံ့ရဲတဲ့လူတယောက်က လုပ်သွားတာမျိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကုဒ်က ဘာလုပ်လဲကောင်းကောင်းနားမလည်တော့ နောင်များပြန်လိုမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လုပ်သွားတာမျိုးပါ။
ကုဒ်တွေ တကယ်မလိုတော့ရင် လုံးဝဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ သင်ပြန်လိုချင်လည်း သင့်ရဲ့ source control system (ကုဒ်တွေအပြောင်းအလဲများကို သိမ်းပေးသော စနစ်) ကနေပြန်ယူလို့ရသားပဲ။
မှတ်ရန်။ ။ ကုဒ်တွေကို မှတ်ချက်အဖြစ် ပိတ်လိုက်ပြီး ဖယ်ရှားတာမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဖတ်မယ့်သူတွေကို ပိုရှုပ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကုဒ်တွေ အရင်က ဘာလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မျိုးမရေးပါနဲ့ ခုအရေးမပါတော့ဘူးလေ။
ကုဒ်တွေရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ဒါက အဆုံးလို့ မှတ်ချက်ရေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ ကုဒ်တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကနေ ဒါကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။
ကုဒ်အတော်များများဟာ မလိုအပ်ပဲ စကားများကြပါတယ်။
အတော်ကို စာလုံးတွေများပြီး ဘာဆိုလိုလည်း နားလည်ရခက်တာမျိုးပါ။ ဒါကို ဒီလိုလွယ်လွယ်လေးပြင်ရေးလို့ရပါတယ်။
သင်သုံးတဲ့ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကသာ ခွင့်ပြုရင် သုံးခုနည်းကို သုံးဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ သုံးခုနည်းဆိုတာ
( (၁။ ဘာဖြစ်လဲစစ်ဆေးမယ်) ? ၂။ မှန်တယ်ဆို ဒီအပိုင်းလုပ်မယ် : ၃။ မှားတယ်ဆိုဒီအပိုင်းလုပ်မယ် )
ဒီနည်းကို သုံးခြင်းဖြင့် သင့်ကုဒ်တွေ ရှုပ်ပွထနေတာကို လျော့နည်းသွားစေမှာပါ။
C Programming စတိုင်မျိုး (variable တွေကို ဟိုးထိပ်ဆုံးမှာပဲကြေညာထားဖို့ လိုအပ်တာမျိုး) ရေးသားပုံမျိုးဟာ အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီ။
ကမ္ဘာကြီးက ရွေ့လျားလာခဲ့ပြီးပါပြီ သင့်ကုဒ်တွေကိုလည်း ရွေ့လျားလိုက်ပါ။
Variable ကြေညာတာနဲ့ ခေါ်သုံးတာကို နည်းကပ်စွာထားရှိပါ။ ကုဒ်တွေကို နားလည်အောင်အားစိုက်ရတာ ပိုလျော့နည်းသွားပြီး ဘာမှမထည့်သွင်းရသေးတဲ့ variable မျိုးသုံးမိတဲ့အမှားမျိုးကိုလည်း လျော့နည်းစေမှာပါ။
တခါတရံ variable တွေကို အကျိုးမရှိကြေညာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ
ဒီလိုပြန်ရေးလိုက်ရင် စာလုံးပိုနည်းမယ့်အပြင် ပိုရှင်းလင်းစေမှာပါ။
မလိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေတည်ရှိနေတာဟာ အောက်ခြေ ကုဒ်အလွှာအမှားတွေကြောင့် ထိန်းသိမ်းမှုအမှားကြောင့် ကြည့်ပဲမဟုတ်ပါဘူး
အပေါ်ယံဒီဇိုင်းစဆွဲကတည်းက အမှားကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအမှားကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများကြားထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများစွာ ပေါ်ပေါက်စေနိုင်ပါတယ်။
တိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ data စုစည်းပေးရတဲ့ကုဒ်တွေ များပြားလာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် data ဖြတ်သန်းမှုတွေပိုဖြစ်လာလေလေ ချို့ယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်ရှိဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများလာလေလေပါပဲ။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကုဒ်အစိတ်အပိုင်းတွေထပ်လာပြီး သူတို့ရဲ့နဂိုအသုံးကနေ လုံးဝခြားနားတဲ့အသုံးသို့ ပြောင်းလဲလာပြီး မသုံးတဲ့ကုဒ်အပိုင်းတွေ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာရင် မသုံးတဲ့အပိုင်းတွေ ဖျက်ပစ်ဖို့ မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။
လိုအပ်လာရင် အိုဟောင်းနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို ပိုရှင်းလင်းတဲ့အသစ်နဲ့ ပြောင်းပစ်လိုက်ပါ။
ဒီဇိုင်းစဆွဲကတည်းက အဆင်သင့်ယူသုံးနိုင်တဲ့ library တွေက သင့်ပရိုဂရမ်းမင်းအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်လား ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါ။
ဒီလို library တွေကို အသုံးချခြင်းဖြင့် မလိုအပ်တဲ့ကုဒ်ပေါင်းများစွာ သင့်ဘာသင်ရေးဖို့လိုတာမျိုးကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ။
အပိုဆုအနေနဲ့ လူသုံးများကျော်ကြားတဲ့ library တွေက ပိုအကြမ်းခံ ပိုအသစ်ထပ်ထည့်ရလွယ် ပိုအသုံးပြုလို့ကောင်းနိုင်ပါတယ်။
မကြောက်ပါနဲ့။ ကျုပ်က whitespace ( spaces တွေ tabs တွေ newlines တွေ) ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
Whitespace က ကောင်းပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
ကဗျာဖွဲ့ရင် အဖြတ်အတောက်ညီသလို Whitespace ကို ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်အသုံးပြုရင် ကျုပ်တို့ကုဒ်တွေ ပိုကြည့်ကောင်းမှာပါ။
Whitespace သုံးဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ အလွန်အကြူးအသုံးပြုရင် ဥပမာ function တွေကြားထဲမှာ အကြောင်းနှစ်ဆယ်လောက် newlines စာကြောင်းလွတ်တွေခြားနေရင် သိပ်လွန်သွားပြီ။
ဒီလိုပါပဲ လက်သည်းကွင်းတွေသုံးတာလည်း သတိထားပါ။ လိုအပ်လို့သုံးရင် logic က ဘာကိုဆိုလိုလည်းဆိုတာ ပိုမိုရှင်းလင်းစေနိုင်ပေမယ့် သုံးတာများလွန်းရင် မလိုအပ်ပဲ ပိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။
မျှမျှတတပြောရရင် ဘယ်သူမှပုံပန်းမကျမလိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေ မရေးချင်ပါဘူး။
လူအချို့ပဲ သဘာဝမကျတဲ့ ထပ်နေတဲ့ အကျိုးမရှိတဲ့ကုဒ်တွေကို တမင်တကာရေးချင်ကြပါတယ်။ (သို့ပေမယ့် ကုဒ်ကောင်းကောင်းရေးဖို့ အားမစိုက်ပဲ အလွယ်လမ်းပဲလိုက်နေတဲ့ အပျင်းထူတဲ့ ပရိုဂရမ်မာတွေလည်း ရှိကြတယ်)
များသောအားဖြင့် ဒီလိုကုဒ်ပြသနာတွေကို အတွေ့ရများတာက ကုဒ်အိုကုဒ်ဟောင်းတွေမှာပါ။ ဒီကုဒ်အိုကုဒ်ဟောင်းတွေကို နှစ်ကာလများစွာ လူပေါင်းများစွာက ပြင်ကြ ထပ်ထည့်ကြ စမ်းသပ်ကြနဲ့ ကုဒ်ပြသနာတွေပေါ်ပေါက်လာရတာပါ။
တကယ်လို့ သင်က ကုဒ်အိုကုဒ်ဟောင်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆို ဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတိပေးချက်တွေကို အမှတ်ရပါ။
Whitespace တွေကို ပြန်လည်သိမ်းယူပါ။
မှတ်ရန်။ ။ သင့်ရဲ့ကုဒ်တွေကို သင်မတွေ့ခင်ကထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ထားခဲ့ပါ။ ပိုတာတွေ မလိုတာတွေကို သင်တွေ့တာနဲ့ ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
ကုဒ်တွေ မလိုတာတွေဖယ်ပစ်တာစတဲ့ ကုဒ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကို တခြားလုပ်ငန်းပိုင်းကုဒ်ပြင်တာတွေနဲ့ မရောပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်ကို ရယူပါ။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ source control system ကိုလည်း ပိုပြီး ရှင်းလင်းစေမှာပါ။
ကုဒ်ရှင်းတာနဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းကုဒ်ပြင်တာကို ရောလိုက်ရင် နားလည်ဖို့ ခက်ခဲလာမှာပါ။
တကယ်လို့ ချို့ယွင်းချက် (bugs) တွေပေါ်လာခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ကုဒ်ရှင်းလင်းရေးကြောင့်လား လုပ်ငန်းပိုင်းကုဒ်ပြင်ဆင်မှု ကြောင့်လား ဝေခွဲမရပဲ လုပ်ရကိုင်ရခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲတခုဘာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကုဒ်ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ သင့်စနစ်ထဲမှာ ကုဒ်အစိတ်အပိုင်းဘယ်နှစ်ခုထိပါဝင်သလဲဆိုတာတွေနဲ့ မဆက်စပ်ပါဘူး။
ကုဒ်အကြောင်းရေများများရေးတိုင်း ပိုလုပ်နိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလို့ ပြောရခက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မလိုရင် မရေးပါနဲ့။
နည်းနည်းနဲ့ကောင်းကောင်းရေးပြီး တခြားပျော်စရာလုပ်ဆောင်မှုကိုသာ ရှာဖွေပါလေ။
၁. သင်ဖော်ပြချက်တွေကို လိုရင်းတိုရှင်းကုဒ်နဲ့ရေးနိုင်ပါသလား။ သင့်လိုတိုရှင်းကုဒ်က နားလည်ဖို့ ပိုခက်နေလား။
၂. သုံးခုနည်းနဲ့ ရေးလို့ ပိုရှင်းလာလား ပိုရှုပ်သွားလား။ ဘာလို့လဲ။
၃. ကျုပ်တို့ cut-and-paste တနေရာက တနေရာကို ကူးရေးနေတာမျိုး ရှောင်သင့်ပါတယ်။ function တခုအနေနဲ့ ခွဲထုတ်မရေးနိုင်ရအောင် ကုဒ်တွေက ဘယ်လောက်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိနေပါသလဲ။
၄. သေဆုံးနေတဲ့ကုဒ်တွေကို သင်ဘယ်လိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသလဲ။
၅. တချို့ကုဒ်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေက မှတ်ချက်များများပါမှ ကောင်းတဲ့စံသတ်မှတ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါတကယ်အသုံးဝင်ရဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုစံမျိုးလိုက်နာတာဟာ မလိုအပ်ပဲ မှတ်ချက်တွေ များပြားလာတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။
အပိုငျး ၁ သငျခနျးစာ ၃ ကုဒျလြှော့ရေးပါ
“အနညျးဆုံးသုံးစှဲခွငျးဖွငျ့ အရာရာပွညျ့စုံလုံလောကျပါစေ” – Jules Verne
ဒီခတျေကွီးမှာ ကုဒျတှအေရမျးမြားလှနျးနတေယျ ဒါဟာ ၀မျးနညျးစရာကောငျးပမေဲ့ မှနျကနျတဲ့အကွောငျးအခကျြပါ။
ကြုပျကားအငျဂငျြကို ကှနျပြူတာနဲ့ထိနျးခြုပျထားတယျဆိုတဲ့အခကျြကို ကြုပျလကျခံနိုငျတယျ။
မိုကျခရိုဝမေီ့းဖိုထဲမှာ ဆော့ဝဲက ခကျြတဲ့အလုပျလုပျတယျဆိုတာလညျး သိသာပါတယျ။
ဇီဝဗဒေနညျးနဲ့ပွုပွငျထားတဲ့ သခှားသီးထဲမှာ မိုကျခရိုကှနျထရိုလာ တခုမွှုပျထားတယျဆိုရငျတောငျ ကြုပျမအံ့သွဘူး။
ကောငျးပါပွီလေ ဒါတှကေို ကြုပျရေးကွီးခှငျကယျြထညျ့ပွောနတောမဟုတျပါဘူး။
ကြုပျစိတျပူမိတာက မလိုအပျပဲမြားပွားနတေဲ့ ကုဒျတှကေိုပါ။
မလိုအပျပဲ ကုဒျတှအေလှနျမြားနတော တှရေ့တယျ။
သိမျးဆညျးစရာအဖိုးတနျ (storage bytes) နရောတှကေို ပိတျဆို့စနေိုငျတယျ။
Source control စနဈ ရဲ့ မှတျတမျးမှတျရာတှကေို ပိုရှုပျထှေးစနေိုငျတယျ။
သူတို့နားက ကောငျးတဲ့ကုဒျတှကေိုလညျး ပိတျဆို့စနေိုငျတယျ။
ဘာကွောငျ့မြား မလိုအပျပဲ ကုဒျတှေ မြားပွားနရေပါလိမျ့။
တခြို့လူတှကေ သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျအသံကို ပွနျကွားခငျြကွတယျ။
သငျသူတို့နဲ့ဆုံလညျး သူတို့က ပါးစပျပေါကျပိတျမသှားဘူး။
ဒီလူတှဟော ပါတီတှမှော သငျမဆုံခငျြတဲ့လူတှပေေါ့။
တခြို့လူတှကွေတော့ သူတို့ကုဒျကို သူတို့အလှနျနှဈသကျကွပွနျတယျ။
ဒီတော့သူတို့က ကုဒျမြားစှာမလိုအပျပဲ ရေးကွတယျ။
နောကျဖွဈနိုငျတာကတော့ သူတို့က တဈနကေု့ဒျအကွောငျးရေ ထောငျနဲ့ခြီရေးမှ တိုးတကျတယျလို့ အကဲဖွတျတတျတဲ့ အယူလှဲမနျနဂြောလကျအောကျမှာ လုပျရတဲ့ ပရိုဂရမျမာတှဖွေဈနိုငျလို့ပါပဲ။
ကုဒျတှအေမြားကွီးရေးတယျဆိုတာနဲ့ပဲ သငျဆော့ဝဲတှအေမြားကွီးအလုပျလုပျတယျလို့ ပွော၍မရပါ။
တကယျတော့ တခြို့ကုဒျတှကေ သငျ့ဆော့ဝဲကို မကောငျးတဲ့အကြိုးကြေးဇူး သကျရောကျစနေိုငျတယျ။
မှတျရနျ ။ ။ ကုဒျလြှော့ရေးခွငျးဖွငျ့ ဆော့ဝဲပိုအလုပျလုပျနိုငျပါတယျ။
ကြုပျရဲ့ဆော့ဝဲအရညျအသှေးမွှငျ့တငျခွငျးတှထေဲက အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျမှုတခုကတော့ ကုဒျတှကေို ဖယျရှားခွငျးဖွဈပါတယျ။
ကြုပျကောငျးကောငျးမှတျမိနတောတခုကတော့ ဆော့ဝဲစနဈတခုကနေ ကုဒျအကွောငျးရေ ထောငျပေါငျးမြားစှာကို ကုဒျဆယျကွောငျးလောကျနဲ့ အစားထိုးလိုကျနိုငျတာပါပဲ။
ဘာကွောငျ့ ကုဒျတှမြေားလှနျးတာဟာ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈယုံမကပဲ ဆိုးရှားလှတာလဲ။
မလိုအပျတဲ့ကုဒျတှကေ အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံးဖွဈရတဲ့အကွောငျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။
ကုဒျအသဈတကွောငျးရေးခွငျးဟာ လူ့အသကျတဈခြောငျးစတငျမှေးဖှားလိုကျသလိုပါပဲ။ ဆော့ဝဲထုတျကုနျသဈအဖွဈမရောကျရှိခငျ ဆော့ဝဲလူ့အဖှဲ့အစညျးအတှကျ အသုံးဝငျပွီး အဖိုးတနျဖွဈလာအောငျ ကလေးတဈယောကျကို ပွုစုစောငျ့ရှောကျသလို ဂရုစိုကျပေးမှရပါမယျ။
သငျ့ဆော့ဝဲစနဈရဲ့ ဘဝသကျတမျးတလြှောကျမှာ ဒီကုဒျတဈကွောငျးကို သငျထိနျးသိမျးပွုပွငျဖို့ လိုအပျလာပါလိမျ့မယျ။ ကုဒျတကွောငျးအတှကျ ပွငျစရိတျနညျးနညျးကပြါလိမျ့မယျ။ သငျကုဒျမြားမြားရေးလေ ပွငျစရိတျပိုမြားလပေါပဲ။ ကုဒျတကွောငျးက အခြိနျကွာကွာပိုအသကျရှငျလေ သူ့အတှကျထိနျးသိမျးစရိတျပိုမြားလပေါပဲ။ ကြုပျတို့ကို ဒဝေါလီခံရစဖေို့မဖွဈခငျ မလိုအပျတဲ့ကုဒျတှကေို အဆုံးသတျပဈဖို့လိုအပျတာ ရှငျးပါတယျ။
ကုဒျတှပေိုမြားလာလလေေ ပိုဖတျရလလေေ ပိုနားလညျစရာမြားလာလလေပေါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ကြုပျတို့ရဲ့ ပရိုဂရမျကို နားလညျသဘောပေါကျဖို့ ပိုခကျလာရော။ မလိုအပျတဲ့ကုဒျအပျိုတှဟော function တခုရဲ့ ရညျရှယျခကျြကို ဖုံးကှယျပဈနိုငျတယျ။ ဆငျတူသလိုရှိနတေဲ့ကုဒျတှမှော ငယျပမေယျ့ အရေးကွီးတဲ့ကှဲပွားခကျြတှကေိုလညျး ဖုံးကှယျပဈနိုငျတယျ။
ကုဒျပိုမြားလာလလေေ ပွငျဖို့လိုလာရငျ ပွငျစရာပိုမြားလာလရှေိ့တာမို့ ပရိုဂရမျကို ပွငျဖို့ ပိုခကျခဲလာပါလိမျ့မယျ။
ကုဒျတှကေ ခြို့ယှငျးခကျြ(bugs) တှကေို ကှယျဝှကျထားပေးနိုငျတယျ။ ကုဒျတှပေိုမြားလာလလေေ ခြို့ယှငျးခကျြတှေ ပုနျးခိုစရာနရောပိုမြားလာလလေပေါပဲ။
ခြှတျစှပျတူတဲ့ကုဒျတှကေ ပိုလို့တောငျ ဒုက်ခပေးနိုငျပါတယျ။ ကျောပီကူးထားတဲ့တဈနရောက ကုဒျတှရေဲ့ခြို့ယှငျးခကျြကို သငျပွုပွငျလိုကျပမေယျ့ သငျမသိပဲ ထပျရှိနသေေးတဲ့ နောကျထပျ၃၂ နရောလောကျက လုံးဝတူညီတဲ့ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို ရှိနပေါလိမျ့မယျ။
မလိုအပျတဲ့ကုဒျတှဟော ဉာဏျနီဉာဏျနကျတတျပါတယျ။ မသုံးပဲထားတဲ့ အစိတျအပိုငျး(components) တှေ၊ အသကျမဲ့နတေဲ့ကုဒျတှေ၊ အဓိပ်ါပယျမရှိတဲ့ မှတျခကျြ(comments) တှေ၊ မလိုအပျပဲ စကားလုံးတှမြေားပွားလှနျးတာတှေ စသဖွငျ့ မလိုအပျတဲ့ကုဒျပိုတှဟော အသှငျမြိုးစုံနဲ့ရှိတတျပါတယျ။
ရညျရှယျခကျြမဲ့နတေဲ့ကုဒျတှကေို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးဥပမာပေးရရငျ မလိုအပျတဲ့ မှနျမမှနျစဈဆေးခွငျးတှပေါပဲ။
ပြာယာခတျအောငျရေးထားတဲ့ logic တှဟော ပြာယာခတျနတေဲ့စိတျကို ကိုယျစားပွုတယျ။
Logic တညျဆောကျပုံတှကေို သခြောနားမလညျလို့လညျး ဖွဈနိုငျတယျ။
ဒီလိုရေးလိုကျတော့ ပိုပွီး ကဈြလဈတဲ့အပွငျ ပိုဖတျရလှယျလို့ နားလညျဖို့ပိုလှယျကူလာတယျ။
အင်ျဂလိပျစာကွောငျးတကွောငျးနဲ့တူလို့ ဖတျရတဲ့လူတှကေိုလညျး ကူညီရာရောကျတယျ။
Compiler ကလညျး ဒီလိုရေးလို့ စိတျလုံးဝမဆိုးဘူးဆိုတာ သငျသိပါသလား။
ထို့နညျးတူစှာ စကားလုံးဖောငျးပှနတေဲ့ အောကျက စဈဆေးခကျြကို
အပွငျလောကမှာတော့ ဒီထကျပိုရှုပျထှေးတဲ့ စဈဆေးခွငျးတညျဆောကျပုံတှကေို ကြုပျတို့ မွငျတှဘေူ့းမှာပါ။
ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးကို ရှုပျထှေးအောငျလုပျပဈနိုငျတဲ့ ပရိုဂရမျမာတဈယောကျရဲ့ အစှမျးအစကို လြှော့မတှကျပါနဲ့။
တကယျ့အပွငျလောကမှာ ဒီထကျပိုရှုပျထှေးနကျနဲတာတှကေ ဒီလိုပုံစံမြိုးလေးတှေ
ဒါကို တကွောငျးတညျးနဲ့ပွတျအောငျ ဒီလိုရေးလို့ရပါတယျ
ဝလေ့ညျကွောငျပတျမလုပျပဲနဲ့ ပွောခငျြတာကို တိုတိုတုတျတုတျနဲ့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးပွောပါ။
သငျသုံးတဲ့ ပရိုဂရမျဘာသာစကားဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲသိအောငျ လုပျဖို့ မရှကျပါနဲ့။
ပရိုဂရမျမှာရေးထားတဲ့ဖျောပွခကျြ ( expression ) တှဟော ဘယျလိုအစဉျအတိုငျးအလုပျလုပျတယျဆိုတာ သိအောငျလုပျထားပွီး အကြိုးရှိရှိအသုံးခခြွငျးဖွငျ့ မလိုအပျတဲ့ logic တှေ အမြားကွီးကို လြှော့ခပြေးနိုငျတယျ။
မှတျရနျ။။ ကုဒျတှကေို တိုတိုနဲ့ ရှငျးရှငျးရေးသားဖျောပွပါ။ မလိုအပျပဲ ကှကေ့ောကျဝဝေို့ကျ ရေးသားခွငျးမြိုး ရှောငျကွဉျပါ။
ကုဒျတှကေို cut-and-paste လုပျပွီး ပရိုဂရမျရေးသားမှုမြိုး ၊ ထပျကာထပျကာရေးမိနတေဲ့ကုဒျတှကေို function တခုခှဲထုတျပွီးရေးလိုကျဖို့ အပငျြးထူတဲ့ ပရိုဂရမျမာတှကေ တဈနရောက တဈနရောကို စာအားလုံး copy ကူးပွီး ရေးသားမှုမြိုးကနေ ကုဒျထပျတာတှေ အမြားဆုံးတှရေ့တတျပါတယျ။
နညျးနညျးလေးပွငျပွီး တခွားနရောကို ကူးယူရေးသားခွငျးက စညျးကမျးပိုဖောကျဖကျြပါတယျ။
ကုဒျတှကေို သငျကူးယူပွီး ရေးလိုကျတဲ့အခါ ထပျနတေဲ့ကုဒျတညျဆောကျပုံကိုပါကူးတာဖွဈတဲ့အတှကျ သငျဟာ ရှိပွီးသား ခြို့ယှငျးခကျြ(bugs) တှကေို ကူးယူမိပွီးသားဖွဈသှားပါတယျ။
တနရောက ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို သငျပွုပွငျလိုကျပမေယျ့ နောကျတနမှေ့ာ နောကျတနရောက ခြှပျစှပျတူတဲ့ခြို့ယှငျးခကျြတှကေ သငျ့ကို ဒုက်ခပေးနဦေးမှာပါ။
နရောတိုငျးမှာထပျကာထပျကာပါနမေယျ့ကုဒျတှကေို function တခုအနနေဲ့ ထုတျရေးပါ။
ဆငျတူနတေဲ့အပိုဒျမြားပွီး နညျးနညျးလေးသာ ကှဲပွားမှုရှိခဲ့ရငျ ကှဲပွားတာတှကေို function ထဲသို့ parameter တခုပေးပို့ပွီး ရေးသားပါ။
မှတျရနျ။ ။ ကုဒျတှကေို အပိုဒျလိုကျ ကူးမရေးပါနဲ့။ ဘုံ function တခုအဖွဈ ထုတျရေးပါ။ ကှဲပွားမှုလေးတှအေတှကျ parameter သုံးပွီး ဖျောပွရေးသားပါ။
DRY နညျးလို့ လူသိမြားတဲ့ နညျးတခုရှိပါတယျ ။ အရှညျက Don’t Repeat Yourself ပါ။ ထပျကာတလဲမလုပျပါနဲ့။ မလိုတာတှမေပါတဲ့အပွငျ မထပျတဲ့ကုဒျမြိုးကို ရညျရှယျရေးသားပါ။ ဆငျတူတဲ့ကုဒျတှကေို မြှဝသေုံးလို့ရတဲ့ function တခုအဖွဈ ရေးသားခွငျးအားဖွငျ့ ကုဒျတှဟော ပိုမိုခြိတျဆကျလာတာကို သတိထားပါ။
မြှဝသေုံးရတဲ့ တနရောထဲကို မှီခိုရသလိုဖွဈလာပွီး ထိုနရောကို ပွငျလိုကျရငျ တခွားချေါသုံးထားတဲ့နရောတှကေိုပါ ပွငျဆငျဖို့ လိုအပျလာမှာဖွဈပါတယျ။
ပုံမှနျကတော့ ဒီလိုပွငျဆငျရတာ အဆငျပွပေမေယျ့ အမွဲတမျးတော့ ဒီလိုဖွဈခငျြမှာမဟုတျပါဘူး ရရှေညျမှာ ကူးရေးတာထကျ ပိုပွသနာတကျနိုငျလို့ တာဝနျသိသိ ရေးသားပါ။
ကုဒျတှထေပျနရေတာ အားလုံးဟာ တမငျတကာလုပျလို့ ပရိုဂရမျမာတှရေဲ့အမှားကွောငျ့မို့လို့ပဲ မဟုတျပါဘူး။
မရညျရှယျပဲ ထပျသှားတာတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။
သူမြားရေးပွီးသားရှိတာကိုမသိပဲ ပွနျတီထှငျနတောမြိုးလညျး ရှိတတျပါတယျ။
အဆငျသငျ့အသုံးခနြိုငျတဲ့ third party library တခုရှိတာကို မသိပါပဲ function အသဈတခုတညျဆောကျရေးသားနတောမြိုးကွောငျ့လညျး ဖွဈနျိုငျပါတယျ။
ဒါက တကယျဆိုးပါတယျ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှိပွီးသား library တခုက ပိုမှနျနျိုငျပွီး ပိုစမျးထားမြိုးဖွဈနိုငျလို့ပါ။
အမြားသုံး library တှကေို သုံးခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့ရဲ့အားထုတျမှုတှကေို သကျသာစမေယျ့အပွငျ ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့အမှားတှကေို ရှောငျရှားနျိုငျပါတယျ။
အနုစိတျထပျနတောမြိုးလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ
if တခုတညျးနဲ့စဈပွီး သုံးကွောငျးလုံးကို အတှငျးထဲမှာထားလိုကျခွငျးဖွငျ့ ပိုသပျရပျစှာရေးနိုငျပါတယျ။
loop မြားစှာပတျနတောကိုလညျး loop တခုထဲသုံးပွီး ပတျနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ
အဖွဈရေးတာက ပိုဖတျရလှယျပွီး ပိုနားလညျဖို့လှယျတဲ့အပွငျ loop တကွိမျပတျရသကျသာသှားလို့ ပိုမွနျလာပါတယျ။
ဒီလိုထပျနတေဲ့ စဈဆေးမှုမြိုးကို သခြောစဉျးစားကွညျ့ပါ။
သငျက ဒီလိုမြိုးဖွဈအောငျ တမငျတကာရေးမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကွိမျဖနျမြားစှာ ပွုပွငျထိနျးသိမျးမှုလုပျထားတဲ့ ကုဒျတှဟော ဒီလိုပုံစံမြိုး အဆုံးသတျသှားလရှေိ့ပါတယျ။
မှတျရနျ။ ။ ထပျနတောတှတှေရေ့ငျ သငျဖယျရှားလိုကျပါ။
ကြုပျမကွာသေးခငျကပဲ device driver တခုရေးထားတာကို အမှားရှာပေးတုနျး ကုဒျထဲမှာ အရေးကွီးတဲ့ loop နှဈခုကို တှရေ့ပါတယျ။
သခြောစဈကွညျ့လိုကျတော့ loop နှဈခုဟာ လုံးဝနညျးပါတူနပွေီး သူတို့ထဲကို ပေးပို့လိုကျတဲ့ data type ပျေါမူတညျပွီး အနညျးငယျမြှသာကှဲပွားခွားနားတာ တှရေ့ပါတယျ။
ကုဒျအကွောငျးရပေေါငျး သုံးရာလောကျရှိတဲ့ loop ထဲမှာ ဒီလိုထပျနတောကို သတိထားမိဖို့ မလှယျလှပါဘူး။
တကယျကို ကှကေ့ောကျ ရှုပျထှေးလှပါတယျ။
Loop တခုခငျြးဆီမှာ မတူတဲ့ ခြို့ယှငျးခကျြ (bugs) တှပွေငျထားလို့ ကုဒျတှကေ အလှာလိုကျကှာသလို ကှာလာပွီး အငျမတနျခနျ့မှနျးရခကျလာပါတယျ။
နညျးနညျးလောကျအားစိုကျပွီး Loop နှဈခုကို တခုထဲဖွဈအောငျ ပေါငျးရေးလိုကျတာ ပွသနာတဝကျလောကျလြော့ပါးသှားစပွေီး ကြုပျအတှကျလညျး တနရောထဲကို အာရုံစိုကျပွီး အမှားရှာနိုငျလာပါတယျ။
သငျမပွုပွငျပဲထားရငျ သငျ့ကုဒျတှဟော ပုပျဆှေးသှားနိုငျပါတယျ။ ကုဒျတှေ သတေောငျသသှေားနိုငျတယျ။ သနေတေဲ့ကုဒျဆိုတာ ဘယျတော့မှချေါမသုံးတဲ့ကုဒျ ပရိုဂရမျက ဘယျတော့မှ မရောကျရှိနိုငျတဲ့ကုဒျတှပေါ။ သူတို့မှာ အသကျမရှိတော့ဘူး။ သငျ့ကုဒျကို အသကျရှငျအောငျလုပျပါ။
အောကျက ဥပမာတှကေ သဆေုံးသှားတဲ့ကုဒျတှပေါ။ အမှတျတမဲ့ကွညျ့ယုံနဲ့သတိထားမိမှာမဟုတျပါ။
ဘယျတော့မှချေါမသုံးတဲ့ function တှေ
ကွငွောထားပွီး ဘယျသောအခါမှ ချေါမသုံးတဲ့ variable တှေ
Function ထဲကို parameter တခုအဖွဈပို့ပေးလိုကျပမေယျ့ အဲ့ parameter ကို ဘယျတော့မှ ချေါမသုံးမိတာမြိုးဖွဈသှားတဲ့ parameter တှေ
ကွငွောထားပမေယျ့ ဘယျတော့မှ ချေါမသုံးတဲ့ Enums, structs, classes, or interfaces တှေ
စိတျမကောငျးစရာကတော့ ဒီကမ်ဘာကွီးက ဆိုးရှားတဲ့ မှတျခကျြတှနေဲ့ ပဟဠေိဆနျနကွေတာပါ။
ကုဒျ editor တခုထဲမှာ မှတျခကျြတှကေို ကြျောခှပွီးဖတျနရေတာမြိုး သငျကွုံဘူးမှာပါ။
တခြို့ကုမ်ပဏီကွီးတှရေဲ့ ကုဒျစံသတျမှတျခကျြက ဦးနှောကျပကျြသှားစလေောကျမယျ့ မှတျခကျြတှေ သိနျးသနျးခြီရေးပါမှ ကောငျးတယျလို့ သတျမှတျတာမြိုးပါ။ တကယျကူညီရာမရောကျပါဘူး။
ကောငျးတဲ့ကုဒျက မှတျခကျြတှေ တထမျးတပိုးနဲ့ အထောကျအကူပွုတာမြိုး မလိုအပျပါဘူး။
ကောငျးတဲ့ကုဒျဆိုတာ ဘယျလိုအလုပျလုပျဆိုတာကို ရှငျးပွနစေရာမလိုပါဘူး။
Variable တှေ function တှေ class တှရေဲ့ နာမညျတှကေို သခြောဂရုတစိုကျ နာမညျပေးခွငျး ကုဒျတှရေဲ့ တညျဆောကျပုံကောငျးအောငျလုပျထားခွငျးဖွငျ့ သငျ့ကုဒျက လုံးဝရှငျးရှငျးလငျးလငျးရှိမှာပါ။
အထကျစာကွောငျးပါ အကွောငျးအရာအခကျြအလကျတှကေို မှတျခကျြထဲ ထပျထညျ့ဖို့ မလိုအပျပါဘူး။
တခွားထပျနတောတှလေိုပဲ ကုဒျမှာရှငျးနတောတှကေို မှတျခကျြထဲမှာထပျမံဖျောပွခွငျးဖွငျ့ ကုဒျပွငျရငျ မှတျခကျြပါပွငျရမှာကို မပွငျမိတဲ့အခါ ပိုအန်တရာယျမြားပါတယျ။
အရူးထရေးတဲ့ မှတျခကျြတှဟော သိမျးရမယျ့ bytes ပမာဏကိုပါ ဖွုနျးတီးရရောကျပါတယျ။ အောကျပါဥပမာကိုကွညျ့ပါ (I တဈတိုးတာ ပရိုဂရမျမာတိုငျးသိပါတယျ မှတျခကျြပေးဖို့ မလိုအပျပါဘူး။)
နောကျဥပမာတခုကိုကွညျ့ပါ။ (မှတျခကျြပေးဖို့မလိုအောငျ ရှငျးပါတယျ)
တခြို့ ရှုပျထှေးတဲ့ algorithm တှေ ကုဒျအပိုငျးတှေ လောကျပဲ မှတျခကျြပေးပွီး ရှငျးပွဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သငျရေးထားတဲ့ ကုဒျအပိုငျးက မှတျခကျြမြားစှာလိုအပျပွီဆိုရငျ function တခုကို နာမညျကောငျးမှနျစှာပေးပွီး ထို function အတှငျး လိုအပျတဲ့ Logic တှေ ခှဲထုတျရေးသားဖွငျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးကွညျ့ပါ။
မှတျရနျ။။ သငျပေးလိုကျတဲ့မှတျခကျြအကွောငျးတိုငျးက ကုဒျရဲ့ တနျဖိုးကို မွငျ့တကျပါစေ။ ကုဒျတှကေ ဘယျလိုအလုပျလဲ ဘာလုပျလဲ သူ့ဘာသူပွောပွနိုငျပါတယျ။ မှတျခကျြကတော့ ဘာကွောငျ့လုပျရလဲဆိုတာ ရှငျးပွသငျ့ပါတယျ။ ကုဒျဖတျတဲ့သူအတှကျ တကယျကို ဘာကွောငျ့လုပျလဲ မရှငျးလငျးမှသာ မှတျခကျြထညျ့သငျ့ပါတယျ။
ကုဒျအဟောငျးတှကေို တကယျမဖယျရှားပဲ မှတျခကျြအဖွဈနဲ့ ပိတျလိုကျတာမြိုး အတှရေ့မြားပါတယျ။
အဲ့လိုမလုပျပါနဲ့။ ကုဒျတှကေို တကယျဖကျြပဈဖို့ မဝံ့ရဲတဲ့လူတယောကျက လုပျသှားတာမြိုးပါ။ ဒါမှမဟုတျ ကုဒျက ဘာလုပျလဲကောငျးကောငျးနားမလညျတော့ နောငျမြားပွနျလိုမလားဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ လုပျသှားတာမြိုးပါ။
ကုဒျတှေ တကယျမလိုတော့ရငျ လုံးဝဖကျြပဈလိုကျပါ။ သငျပွနျလိုခငျြလညျး သငျ့ရဲ့ source control system (ကုဒျတှအေပွောငျးအလဲမြားကို သိမျးပေးသော စနဈ) ကနပွေနျယူလို့ရသားပဲ။
မှတျရနျ။ ။ ကုဒျတှကေို မှတျခကျြအဖွဈ ပိတျလိုကျပွီး ဖယျရှားတာမြိုး ရှောငျကွဉျပါ။ ဖတျမယျ့သူတှကေို ပိုရှုပျစနေိုငျပါတယျ။
ကုဒျတှေ အရငျက ဘာလုပျခဲ့ဘူးတယျဆိုတဲ့မှတျခကျြမြိုးမရေးပါနဲ့ ခုအရေးမပါတော့ဘူးလေ။
ကုဒျတှရေဲ့ အဆုံးသတျမှာ ဒါက အဆုံးလို့ မှတျခကျြရေးတာမြိုးမလုပျပါနဲ့ ကုဒျတှရေဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံကနေ ဒါကို အလှယျတကူသိနိုငျပါတယျ။
ကုဒျအတျောမြားမြားဟာ မလိုအပျပဲ စကားမြားကွပါတယျ။
အတျောကို စာလုံးတှမြေားပွီး ဘာဆိုလိုလညျး နားလညျရခကျတာမြိုးပါ။ ဒါကို ဒီလိုလှယျလှယျလေးပွငျရေးလို့ရပါတယျ။
သငျသုံးတဲ့ ပရိုဂရမျးမငျးဘာသာစကားကသာ ခှငျ့ပွုရငျ သုံးခုနညျးကို သုံးဖို့ မတှနျ့ဆုတျပါနဲ့။ သုံးခုနညျးဆိုတာ
( (၁။ ဘာဖွဈလဲစဈဆေးမယျ) ? ၂။ မှနျတယျဆို ဒီအပိုငျးလုပျမယျ : ၃။ မှားတယျဆိုဒီအပိုငျးလုပျမယျ )
ဒီနညျးကို သုံးခွငျးဖွငျ့ သငျ့ကုဒျတှေ ရှုပျပှထနတောကို လြော့နညျးသှားစမှောပါ။
C Programming စတိုငျမြိုး (variable တှကေို ဟိုးထိပျဆုံးမှာပဲကွညောထားဖို့ လိုအပျတာမြိုး) ရေးသားပုံမြိုးဟာ အတိတျမှာကနျြခဲ့ပါပွီ။
ကမ်ဘာကွီးက ရှလြေ့ားလာခဲ့ပွီးပါပွီ သငျ့ကုဒျတှကေိုလညျး ရှလြေ့ားလိုကျပါ။
Variable ကွညောတာနဲ့ ချေါသုံးတာကို နညျးကပျစှာထားရှိပါ။ ကုဒျတှကေို နားလညျအောငျအားစိုကျရတာ ပိုလြော့နညျးသှားပွီး ဘာမှမထညျ့သှငျးရသေးတဲ့ variable မြိုးသုံးမိတဲ့အမှားမြိုးကိုလညျး လြော့နညျးစမှောပါ။
တခါတရံ variable တှကေို အကြိုးမရှိကွညောတတျပါတယျ။ ဥပမာ
ဒီလိုပွနျရေးလိုကျရငျ စာလုံးပိုနညျးမယျ့အပွငျ ပိုရှငျးလငျးစမှောပါ။
မလိုအပျတဲ့ကုဒျတှတေညျရှိနတောဟာ အောကျခွေ ကုဒျအလှာအမှားတှကွေောငျ့ ထိနျးသိမျးမှုအမှားကွောငျ့ ကွညျ့ပဲမဟုတျပါဘူး
အပျေါယံဒီဇိုငျးစဆှဲကတညျးက အမှားကွောငျ့လညျး ဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။
ဒီဇိုငျးအမှားကွောငျ့ အစိတျအပိုငျးမြားကွားထဲမှာ မလိုအပျတဲ့ ဆကျသှယျရေးလမျးကွောငျးမြားစှာ ပျေါပေါကျစနေိုငျပါတယျ။
တိကတြဲ့အကွောငျးပွခကျြမရှိပဲ data စုစညျးပေးရတဲ့ကုဒျတှေ မြားပွားလာနိုငျပါတယျ။
နောကျထပျ data ဖွတျသနျးမှုတှပေိုဖွဈလာလလေေ ခြို့ယှငျးတဲ့လမျးကွောငျးကိုရောကျရှိဖို့ ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားလာလလေပေါပဲ။
အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ကုဒျအစိတျအပိုငျးတှထေပျလာပွီး သူတို့ရဲ့နဂိုအသုံးကနေ လုံးဝခွားနားတဲ့အသုံးသို့ ပွောငျးလဲလာပွီး မသုံးတဲ့ကုဒျအပိုငျးတှေ ပိုမြားလာနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုဖွဈလာရငျ မသုံးတဲ့အပိုငျးတှေ ဖကျြပဈဖို့ မကွောကျရှံ့ပါနဲ့။
လိုအပျလာရငျ အိုဟောငျးနတေဲ့အစိတျအပိုငျးကို ပိုရှငျးလငျးတဲ့အသဈနဲ့ ပွောငျးပဈလိုကျပါ။
ဒီဇိုငျးစဆှဲကတညျးက အဆငျသငျ့ယူသုံးနိုငျတဲ့ library တှကေ သငျ့ပရိုဂရမျးမငျးအခကျအခဲကို ဖွရှေငျးပေးနိုငျလား ထညျ့သှငျးစဉျးစားထားပါ။
ဒီလို library တှကေို အသုံးခခြွငျးဖွငျ့ မလိုအပျတဲ့ကုဒျပေါငျးမြားစှာ သငျ့ဘာသငျရေးဖို့လိုတာမြိုးကို ရှောငျရှားနိုငျမှာပါ။
အပိုဆုအနနေဲ့ လူသုံးမြားကြျောကွားတဲ့ library တှကေ ပိုအကွမျးခံ ပိုအသဈထပျထညျ့ရလှယျ ပိုအသုံးပွုလို့ကောငျးနိုငျပါတယျ။
မကွောကျပါနဲ့။ ကြုပျက whitespace ( spaces တှေ tabs တှေ newlines တှေ) ကို တိုကျခိုကျဖို့ မဟုတျပါဘူး။
Whitespace က ကောငျးပါတယျ။ အသုံးပွုဖို့ မကွောကျပါနဲ့။
ကဗြာဖှဲ့ရငျ အဖွတျအတောကျညီသလို Whitespace ကို ခငျြ့ခငျြ့ခြိနျခြိနျအသုံးပွုရငျ ကြုပျတို့ကုဒျတှေ ပိုကွညျ့ကောငျးမှာပါ။
Whitespace သုံးဖို့ မလိုအပျဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတျပါ။ ဒါပမေယျ့ တခါတလေ အလှနျအကွူးအသုံးပွုရငျ ဥပမာ function တှကွေားထဲမှာ အကွောငျးနှဈဆယျလောကျ newlines စာကွောငျးလှတျတှခွေားနရေငျ သိပျလှနျသှားပွီ။
ဒီလိုပါပဲ လကျသညျးကှငျးတှသေုံးတာလညျး သတိထားပါ။ လိုအပျလို့သုံးရငျ logic က ဘာကိုဆိုလိုလညျးဆိုတာ ပိုမိုရှငျးလငျးစနေိုငျပမေယျ့ သုံးတာမြားလှနျးရငျ မလိုအပျပဲ ပိုရှုပျထှေးစနေိုငျပါတယျ။
မြှမြှတတပွောရရငျ ဘယျသူမှပုံပနျးမကမြလိုအပျတဲ့ကုဒျတှေ မရေးခငျြပါဘူး။
လူအခြို့ပဲ သဘာဝမကတြဲ့ ထပျနတေဲ့ အကြိုးမရှိတဲ့ကုဒျတှကေို တမငျတကာရေးခငျြကွပါတယျ။ (သို့ပမေယျ့ ကုဒျကောငျးကောငျးရေးဖို့ အားမစိုကျပဲ အလှယျလမျးပဲလိုကျနတေဲ့ အပငျြးထူတဲ့ ပရိုဂရမျမာတှလေညျး ရှိကွတယျ)
မြားသောအားဖွငျ့ ဒီလိုကုဒျပွသနာတှကေို အတှရေ့မြားတာက ကုဒျအိုကုဒျဟောငျးတှမှောပါ။ ဒီကုဒျအိုကုဒျဟောငျးတှကေို နှဈကာလမြားစှာ လူပေါငျးမြားစှာက ပွငျကွ ထပျထညျ့ကွ စမျးသပျကွနဲ့ ကုဒျပွသနာတှပေျေါပေါကျလာရတာပါ။
တကယျလို့ သငျက ကုဒျအိုကုဒျဟောငျးတှနေဲ့ အလုပျလုပျရမယျဆို ဒီမှာဖျောပွခဲ့တဲ့ သတိပေးခကျြတှကေို အမှတျရပါ။
Whitespace တှကေို ပွနျလညျသိမျးယူပါ။
မှတျရနျ။ ။ သငျ့ရဲ့ကုဒျတှကေို သငျမတှခေ့ငျကထကျ ပိုကောငျးအောငျ လုပျထားခဲ့ပါ။ ပိုတာတှေ မလိုတာတှကေို သငျတှတေ့ာနဲ့ ဖယျရှားပဈပါ။
ကုဒျတှေ မလိုတာတှဖေယျပဈတာစတဲ့ ကုဒျသနျ့ရှငျးရေးလုပျတာကို တခွားလုပျငနျးပိုငျးကုဒျပွငျတာတှနေဲ့ မရောပဲလုပျဖို့လိုတယျဆိုတဲ့ အကွံပေးခကျြကို ရယူပါ။
ဒီလိုလုပျခွငျးဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ source control system ကိုလညျး ပိုပွီး ရှငျးလငျးစမှောပါ။
ကုဒျရှငျးတာနဲ့ လုပျငနျးပိုငျးကုဒျပွငျတာကို ရောလိုကျရငျ နားလညျဖို့ ခကျခဲလာမှာပါ။
တကယျလို့ ခြို့ယှငျးခကျြ (bugs) တှပေျေါလာခဲ့ရငျ သငျ့ရဲ့ကုဒျရှငျးလငျးရေးကွောငျ့လား လုပျငနျးပိုငျးကုဒျပွငျဆငျမှု ကွောငျ့လား ဝခှေဲမရပဲ လုပျရကိုငျရခကျခဲနိုငျပါတယျ။
ဆော့ဝဲတခုဘာလုပျငနျးဆောငျတာတှေ လုပျဆောငျနိုငျတယျဆိုတာ ကုဒျဘယျနှဈကွောငျးပါလဲ သငျ့စနဈထဲမှာ ကုဒျအစိတျအပိုငျးဘယျနှဈခုထိပါဝငျသလဲဆိုတာတှနေဲ့ မဆကျစပျပါဘူး။
ကုဒျအကွောငျးရမြေားမြားရေးတိုငျး ပိုလုပျနျိုငျတဲ့ဆော့ဝဲလို့ ပွောရခကျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မလိုရငျ မရေးပါနဲ့။
နညျးနညျးနဲ့ကောငျးကောငျးရေးပွီး တခွားပြျောစရာလုပျဆောငျမှုကိုသာ ရှာဖှပေါလေ။
၁. သငျဖျောပွခကျြတှကေို လိုရငျးတိုရှငျးကုဒျနဲ့ရေးနိုငျပါသလား။ သငျ့လိုတိုရှငျးကုဒျက နားလညျဖို့ ပိုခကျနလေား။
၂. သုံးခုနညျးနဲ့ ရေးလို့ ပိုရှငျးလာလား ပိုရှုပျသှားလား။ ဘာလို့လဲ။
၃. ကြုပျတို့ cut-and-paste တနရောက တနရောကို ကူးရေးနတောမြိုး ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ function တခုအနနေဲ့ ခှဲထုတျမရေးနိုငျရအောငျ ကုဒျတှကေ ဘယျလောကျကှဲပွားခွားနားမှုတှေ ရှိနပေါသလဲ။
၄. သဆေုံးနတေဲ့ကုဒျတှကေို သငျဘယျလိုတှရှေိ့နိုငျပါသလဲ။
၅. တခြို့ကုဒျစံနှုနျးသတျမှတျခကျြတှကေ မှတျခကျြမြားမြားပါမှ ကောငျးတဲ့စံသတျမှတျလရှေိ့တယျ။ ဒါတကယျအသုံးဝငျရဲ့လား။ ဒါမှမဟုတျ ဒီလိုစံမြိုးလိုကျနာတာဟာ မလိုအပျပဲ မှတျခကျြတှေ မြားပွားလာတာမြိုးဖွဈစနေိုငျပါသလား။
← ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်မာ – ၃	ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်မာ – ၅ →